Britain oo wayday darajada AAA - BBC Somali - Ganacsi
Britain oo wayday darajada AAA
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 Febraayo, 2013, 12:21 GMT 15:21 SGA
Dhaqaalaha Britain ayaa wxaa saamayn ku yeeshay hoos u dhaca dhaqaalaha Yurub iyo dowladda oo lagu leeyahay ammaah badan oo ay wali qaadanayso.
Dowladda Britain ayaa sheegtay inay sii wadayso dadaalka ay ugu jirto inay yarayso lacagta lagu leeyahay dowladda kadib markii Britain laga qaaday darajada ugu saraysa ee AAA oo lagu qiimaynayay lacagta la amaahinayo.
Darajadan oo ah tan ugu saraysa ayaa u suurtogalisa Britain inay si raqiis ah kaga soo ammaahato lacag suuqyada lacagaha.
Britain ayaa hadda lacagaha ay soo amaahato dhiibta dulsaar dhan boqolkiiba laba.
Wasiirka Maaliyada ee Britain George Osborne ayaa sheegay hoos udhiga darajada lagu qiimeeyo amaahyada inay sii adkaysay sida loo baahan yahay in lagu yareeyo ammaahyda lagu leeyahay dowladda. Moody oo ah hayadda hoos u dhigtay darajada Britain ee ay lacagta ku ammaahato, ayaa sabab uga dhigtay go'aankeeda in kororka dhaqaalaha hoos u dhacay ee Britain, iyo yaraynta miisaaniyada dowladda ay sii soconayaan ilaa kala barka shanta sano ee soo socota.